'चिसो मान्छे' बारे के भन्छन् निर्देशक खनाल र अभिनेता थापा? (भिडिओ) :: संगीता गिरी :: Setopati
'चिसो मान्छे' बारे के भन्छन् निर्देशक खनाल र अभिनेता थापा? (भिडिओ)
गत शुक्रबारदेखि हलमा चलिरहेको छ दीपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्म 'चिसो मान्छे'। फिल्म प्रदर्शन भइरहँदा हलमा गुञ्जिने तालीले खनाललाई हौसला दिएको छ।
बक्सअफिसमा पनि राम्रै कमाइ गरिरहेको 'चिसो मान्छे' को धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। सँगै कतिले 'स्लो' भएको, पात्रहरूले सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको लगायत टिप्पणी पनि गरेका छन्।
दुवै हिसाबमा चिसो मान्छेबारे बहस सुरू भएको छ। निर्देशक खनाल आफ्नो फिल्मबारे चलिरहेको बहसलाई आफ्नो सफलता मान्छन्।
'मसलादार फिल्म खोज्नेलाई यो फिल्म हुँदै होइन। हामीले कस्तो फिल्म बनाउन खोजेको र कस्तो दृश्य भाषा प्रयोग गर्न खोजेको भनेर फिल्म हेर्ने र फिल्म बुझ्ने मान्छे थाहा पाउनु हुन्छ। फिल्ममा रमाइलो खोज्नेहरूका लागि चिसो मान्छे होइन,' उनी भन्छन्।
उनका अनुसार फिल्म दुई किसिमका हुन्छन्। बहस हुने फिल्मको सिर्जनात्मक मूल्य हुन्छ। त्यो फिल्मले कालान्तरमा सफलता हात पार्छ। त्यस्तै अर्का किसिमका फिल्मले मनोरञ्जन दिए पनि हलबाट निस्किएसँगै त्यसको चर्चा सकिने खनाल बताउँछन्।
'त्यसले हाम्रो दिमागमा केही छाप छोड्दैन। व्यापार र कला फरक कुरा हो,' निर्देशक खनालले भने।
अभिनेता अर्पण थापा पनि चिसो मान्छे आफूले अपेक्षा गरेजस्तै फिल्म बनेको बताउँछन्।
'यो एउटा सामाजिक कथामा बनेको फिल्म हो। त्यसैले ब्लकबस्टर ओपनिङको अपेक्षा गरेका थिएनौं। तर चिसो मान्छे राम्रो फिल्मका रूपमा चिनिन्छ भन्ने थियो। त्यो पूरा भएको छ,' थापा भन्छन्।
प्रायः खलनायकको भूमिकामा देखिने थापा चिसो मान्छेमा शान्त स्वभावका देखिन्छन्। यस फिल्ममा 'हिरोइज्म' देखाउने पात्रका रूपमा नदेखिए पनि आफ्नो भूमिका हिरोकै रूपमा रहेको उनी बताउँछन्।
'चिसो मान्छेमा मेरो भूमिका हिरोकै हो भन्न रूचाउँछु। फिल्मको हिरो हुनु र फिल्मको पात्र हिरो हुनु फरक कुरा हो,' उनले भने, 'यो फिल्म मानवीय स्वभावमा ध्यान दिनुपर्ने खालको छ। आफूलाई कलाकारका रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने भनेको यस्तै फिल्मबाट हो। तर अन्य खालको फिल्ममा पनि अभिनय गर्नै पर्छ, अब्बल हुनै पर्छ।'
नेपालीपन भएको नेपाली फिल्म चाहनेहरूका लागि चिसो मान्छे राम्रो रोजाइ हुने उनीहरू बताउँछन्।
निर्देशक खनाल भन्छन्, 'हामी सधैं राम्रो फिल्मको खोजीमा छौं। तर केही फरक फिल्म आउँदा स्वीकार्न सक्दैनौं। पैसा नै कमाउने हिसाबले फिल्म बनाउने हो भने त खासै मेहनत गर्नु पर्दैन। रोमान्टिक गीत, अरू फिल्मका सिन यताउता गरेर राखे पुग्छ। तर मेरा पशुपति प्रसाद र आमा फिल्म हेर्नुभएका दर्शकले मैले यस्तो कमाउने हिसाबले फिल्म बनाएँ भने गाली गर्नुहुन्छ।'
चिसो मान्छेमा स्वस्तिमा खड्का, अर्पण थापा र देशभक्त खनालको मुख्य भूमिका छ।
हामीले भने फिल्मबारे चलेको बहस र कथासँग सम्बन्धित रहेर निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल र अभिनेता अर्पण थापासँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९, १५:३२:००